Filohan’ny Holafitry ny Mpanao gazety: nitsidika ny Lehiben’ny Faritra Boeny | Région Boeny
Manatanteraka fampiofanana eto Mahajanga mandritra ny andro vitsivitsy ny Filohan’ny Holafitry ny Mpanao gazety eto Madagasikara, Atoa Rakotonirina Gérard, ka miezaka mandritra izany mitsidika ireo mpitondra eto an-toerana.
« Ho fanajana ny ray aman-dreny ara-ptiondrana eto an-toerana, na dia mandalo tsy amin’ny maha Holafitra aza ny tenako dia adidiko ny mitsidika azy ireo isan’ambaratonga isaky ny faritra lalovako. »
Io no nanazavan’Atoa Rakotonirina Gérard, ny antom-pitsidihany tao amin’ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar tao amin’ny biraon’ity farany ny Alarobia 28 septambra 2016. Niara-dia taminy ny filoha lefitra misahana ny faritanin’i Mahajanga, Atoa Tony Josoa, tonian’ny fanoratana ao amin’ny M3TV/M3FM eto Mahajanga.
Antony manokana amin’ny fitsidihana nataony ihany koa ny mifanakalo hevitra mikasika ny fifandraisan’ireo mpitondra sy ireo mpanao gazety eto an-toerana, satria adidiko ihany koa hoy izy, amin’ny maha-filohan’ny Holafitra ahy ny mandrindra izay fifandraisaina saro-pady izay.
Tsara ny fiaraha-miasan’ny mpitondra amin’ny mpanao gazety rehetra eto Boeny amin’ny ankapobeny, indrindra ny amiko sy ny amin’izy ireo hoy kosa ny Lehiben’ny Faritra. Ary anisan’ny antony iray maha-lavorary izany ny tsy famihinanay ny zava-misy (rétention d’informations) amin’izy ireo.
Misy ihany nefa na izany aza hoy izy, noho ny fitsipim-pamoahana izay tsy maintsy arahin’ireo tranon-gazety tsirairay, ny tsy fitoviam-pijery eo amin’ny famoahan’ireo haino aman-jery sasany eto ny vaovaonay mpitondra eto an-toerana na avy any amin’ny foibe, fa tsy manelingelina ny fifandraisanay amin’ireo mpanao gazety rehetra eto izany.
Mikasika ny Lalànan-tserasera manokana, dia nanambra ny Filohan’ny Holafitra fa malalaka ny rehetra maneho ny heviny na olon-tsotra izany na mpanao gazety fa ny Holafitra manokana kosa dia tsy afaka mifamatotra velively, amin’izay rehetra hetsika momba azy io satria vondron-tserasera marolafy tsy mahazo manana fironana io rafitra io.
« Ny faniriako dia ny mba hisian’ny fifanatonana sy fifampiresahana amin’ny endrika ray aman-dreny sy zanaka eo amin’ny mpitondra sy mpanao gazety rehetra, satria samy miara-miana anaty fiarahamonina iray isika rehetra.» Hoy izy teny am-pamaranana.